Unokwenza ntoni ngee-mobiles ezindala: ezona ndlela zokuzisebenzisa | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Andiqinisekanga ukuba wenzeni ngee-mobiles zakho ezindala? Iindlela zokubanika ubomi besibini
UNerea Pereira | 02/07/2021 10:00 | Izaziso
Ngaphandle kwento yokuba intengiso iya isanda igcwele ngeefowuni eziphathwayo, inyani kukuba sitshintsha kancinci nangaphantsi. Nangona kunjalo, ngokwenza njalo sinethuba lokunika ukusetyenziswa kweselfowuni endala endaweni yokuba siyilahle kwaye sibe nephepha elinzima. Kwaye ke, kuyinto eqhelekileyo ukuba awazi wenzeni ngeemofiles ezindala ezijikeleze indlu yakho.
Olunye ukhetho onalo, umzekelo, ukuyiguqula ibe yikhamera yokujonga, isidlali semultimedia okanye isazisi seGPS phakathi kwezinye izinto ezininzi. Ke ukuba ucinga ngokuthengisa, ukunikezela, ukunika okanye nokurisayikilisha kwakhona, jonga kuqala ukhetho esinikezela ukuba ukwazi ukukwenza ngalo.
1 Unokwenza ntoni ngee-mobiles ezindala: ezona ngcebiso zibalaseleyo kunye namaqhinga
1.1 Imouse yekhompyuter kunye nekhibhodi
1.2 I-GPS navigator
1.3 Ikhamera yokujonga ividiyo
1.4 Ikhonkco leRetro
1.5 Inxibe ezemidlalo
1.6 Ulawulo olukude lweTV
1.7 Isakhelo sefoto
1.8 Iwotshi yealam ekrelekrele
1.9 Ukucula izixhobo
1.10 Isidlali semidiya
1.11 Ukujonga usana
Unokwenza ntoni ngee-mobiles ezindala: ezona ngcebiso zibalaseleyo kunye namaqhinga
Imouse yekhompyuter kunye nekhibhodi
Kuyinyani ukuba isenokuvakala ingaqhelekanga sebenzisa iselfowuni njengegundane kunye nekhibhodi, Kodwa kunokwenzeka ukuba uyisebenzise kwimeko egqithileyo njengeqhekeza lesitshixo okanye iphedi yokuchukumisa iyayeka ukusebenza.
Ukwenza oku, kuya kufuneka ufake isicelo esinjenge-Unified Remote (i-iOS kunye ne-Android) usebenzisa iWiFi okanye uqhagamshelo lweBluetooth. Imouse ekude (i-iOS kunye ne-Android) okanye iMouse Kit (i-Android) zezinye iindlela ezifanelekileyo.
Umthuthukisi: Iinjongo eziManyeneyo
Kuncinci namhlanje ukuba iiselfowuni azenzi, kwaye ukuzisebenzisa njengeGPS yeyona nto iqhelekileyo kuthathelwa ingqalelo ukuba kukho usetyenziso olufana Iimephu zikaGoogle okanye iWaze. Nangona sele uzifakile kwiselfowuni yakho, unokuhlala usebenzisa le fowuni yesibini njenge-GPS.
Oku kuthetha ukuba akukho nto iya kuphazamisa unxibelelwano lwakho lokukhangela, Ukongeza ekugcineni ibhetri yefowuni yakho ephambili ephathekayo. Nangona ugcine engqondweni ukuba ukusebenzisa i-smartphone njengeGPS uzakufuna uqhagamshelo lwe-Intanethi, nangona ezinye iinkqubo ezinje ngeMephu zikaGoogle zikuvumela ukuba ukhuphele iimephu kwaye uzisebenzise ngaphandle konxibelelwano.
Ikhamera yokujonga ividiyo
Uyayazi loo nto, ukuba awazi ukuba wenzeni ngee-mobiles ezindala, ngokusebenzisa ezinye izicelo onokuthi uzenze vula i-smartphone yakho ibe yikhamera yokujonga Kwaye ukuyenza ilula kuzo zombini i-iOS kunye ne-Android.
Ngezi zicelo mobile yakho iya kusebenza njengekhamera yokujonga, ibonelela ngemisebenzi efanayo njengokurekhoda yonke into eyenzekayo okanye ikubonise imifanekiso ngexesha lokwenyani elikuloo ndawo ubeke isixhobo kuyo.
Kuyinto eqhelekileyo ukuba ezona mobiles zale mihla zibe neeprosesa ezingcono kunye ne-RAM ephezulu kunye nezinye iindlela ezinokuthi zikwazi baleka imidlalo ye-retro. Nangona unokukhetha kwakhona Sebenzisa isixhobo sakho njengekhonsoli yomdlalo wevidiyo ophathwayo usebenzisa i-emulators ethile ukongeza ekusebenziseni umhlaba wevidiyo.
Nangona imakethi sele inikezela ngezixhobo ezahlukeneyo ezithi zibeke iliso kwimisebenzi yakho yomzimba, uya kuba nakho ukusebenzisa iselfowuni kuyo. Vula Ivenkile yesicelo unokufumana usetyenziso olulawula umthambo owenzayo, Iikhalori ozitshisileyo okanye ubala ixesha otyale ngalo umthambo. Ke ngoko, unokusebenzisa i-smartphone yakho yakudala ukuyithatha ukuya nayo yonke imihla yezemidlalo.
Ulawulo olukude lweTV
Ngamanye amaxesha kuyenzeka ukuba siphulukane nolawulo olukude kwaye singazi ukuba silushiye phi, okanye luyeka nje ukusebenza. Kule meko Awuyi kuthenga entsha, njengoko i-smartphone yakho endala inokusebenza njengolawulo olukude Ngokusebenzisa iinkqubo ezahlukeneyo zikaGoogle Play ezinje nge-Universal TV Remote ebonisa ukuhanjiswa kwesiqhelo esiqhelekileyo kwiscreen sesixhobo.
Ukuba ayinayo inzwa ye-infrared, unokuqhagamshela ezinye izixhobo ngeWiFi, kwaye ngenxa yoku kuya kufuneka unazo zombini i-smartphone kunye nomabonwakude oxhunyiwe kwinethiwekhi efanayo ye-WiFi. Emva kokuba unayo yonke into, ungasebenzisa izicelo ezifana ne-SURE Universal okanye ezinye ezininzi ezinikezelwa ngabavelisi ngokwabo. Ukuba unayo i-Android TV, ungasebenzisa usetyenziso lwe-Android TV Remote app, kwaye ukuba une-iOS ungasebenzisa usetyenziso olufana ne-myTifi, qhagamshela i-Apple TV kwaye usebenzise i-Apple TV Remote.
Enye yeendlela ezilungileyo zokusebenzisa ithuba lokuhamba okudala kukuba Sebenzisa i-smartphone yakho yakudala njengezakhelo zeefoto zedijithali phi ukuvelisa kwakhona imifanekiso eyahlukeneyo. Uninzi lwezicelo zikuvumela ukuba wenze lo msebenzi, njenge-Digital Photo Frame kwi-Android okanye kwi-LiveFrame kwi-iOS.
Isakhelo sefoto yedijithali Umboniso wesilayidi
Umthuthukisi: UJeroben Wyseur
Iwotshi yealam ekrelekrele
Xa bazisa ukusebenza kweialamu ngaphakathi kweeselfowuni, iiwotshi zealam zaye zalityalwa ngakumbi. Yiyo loo nto ungayeka ukusebenzisa i-smartphone yakho ephambili ukuzalisekisa loo msebenzi kwaye usebenzise iselfowuni yakho yesibini njengewotshi yealam ukuze ialam ivakalise ntsasa nganye. Kukho ezinye iinkqubo ezilungileyo kakhulu zoku, ezinje ngeXesha elifanelekileyo kwi-Android okanye kwiBycle yokulala: iwotshi ye-alarm kwi-iOS
Ngexesha elifanelekileyo: Inkqubo yokuKhangela ixesha kunye neeYure eziBhatalekayo
Umthuthukisi: Imemori AS
Ukuba uhlala udlala izixhobo rhoqo, lo msebenzi uya kuba nomdla kuwe, kuba ezinye iinkqubo onokuzifumana kuGoogle Play zikuvumela ukuba wenze izixhobo zakho zomculo ngokungathi yigitare. Kungumsebenzi olungileyo ukusebenzisa i-smartphone yakho yakudala kwaye awunyanzelekanga ukuba uqhubeke nokusebenzisa iselfowuni yakho ephambili ukwenza izixhobo zakho ngalo lonke ixesha uza kuzisebenzisa. Ezinye zezona zicelo zibalaseleyo ngumzekelo I-guitar tuner ayiluncedo kuphela kweso sixhobo, kodwa nakwabanye njengebhasi okanye ukulele, kwaye unokuzilolonga ngokulula nangokuchaneka ngobuchule.
Ngokuqinisekileyo Nokuba usebenzisa iselfowni yakho ephambili okanye iselfowuni yakho yakudala ukumamela umculo okanye ukubona imovie okanye uthotho. Kodwa ngaba ukhe wakuthathela ingqalelo ukwenza umngxunya kwigumbi lakho lokuhlala apho usibeka khona isixhobo sakho kwaye usisebenzisele le njongo kuphela?
Kwaye i-smartphone sisixhobo esifanelekileyo kulo msebenzi, kuba ukongeza ekukhupheleni usetyenziso okanye abadlali kuyo njengeSpotify okanye naliphi na iqonga lokusasaza, ungadibanisa neChromecast ukuze ukwazi ukuthumela yonke imixholo yeselfowuni. isikrini seTV yakho kwaye ke ukwazi ukubona umxholo kubungakanani obukhulu.
KwiGoogle Play nakwiVenkile yeApple uya kufumana usetyenziso olujika i-smartphone yakho ibe liliso lomntwana. Ke unokunika ubomi besibini kwiselfowuni yakho yakudala, ngelixa urekhoda umntwana wakho omncinci kunye nokuthumela izaziso kunye nezilumkiso xa ekhala okanye ebona intshukumo.
Esi sicelo sikwakuvumela ukuba uthethe ukude nomntwana okanye udlale umculo kwaye umenze awuphulaphule ukuze umthobise, ukongeza ekugcineni i-log ngomsebenzi okanye izilumkiso xa i-Intanethi ifika ngoxhumo oluphantsi okanye xa ibhetri isebenza isezantsi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Andiqinisekanga ukuba wenzeni ngee-mobiles zakho ezindala? Iindlela zokubanika ubomi besibini
Ezona zixhobo zi-5 zibalaseleyo zebhodi emhlophe ze-Android
Imidlalo emi-7 efanayo phakathi kwethu ye-Android